Ukuqeqeshwa kwabagcini kanye nendawo yokusiza / igaraji (ukufunda + ukusebenza i-Spectrumschool)
Ukhonza amakhasimende etafuleni. Ukhonza izitsha bese ubatshela ukuthi umpheki ulungiselele. Umlondolozi angasebenza futhi ngemuva kwebha futhi azi konke mayelana neziphuzo. Ufunda ukuthi ungabeka kanjani itafula futhi uqinisekisa indlela yokugcoba ekudleni. Sinikeza umsizi wokuqeqeshwa ngenqubo emibili. Ukufunda okubili kusho ukuthi ufunda ukuhweba kwakho esikoleni nasezindaweni zokusebenza. Uzokhokhwa futhi ngezinsuku zakho zokusebenza.
Wena uhilelekile emphakathini
Ukuqeqeshwa Umsizi kuthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemihlanu.
Uqala kumamodeli wesiphakeli esizayo.
Ngesitifiketi se umsizi Uyaqiniseka ngomsebenzi?
Uma ufuna ukwenza ngokukhethekile, ungaqhubeka nokusebenza njengoba KELNER - IGARCON.
Abalindi banesithakazelo esikhulu emakethe yomsebenzi.
Awudingi yiluphi ulwazi olukhethekile lwangaphambi kosizo lokusiza (Umsizi).
Usebenza ku-HORECA. Lisebenza ngamahora ashintshayo. Ngokuvamile usebenza kusihlwa. Ungaya futhi kuma-amathilomu nokudlela.
UKELNERS banesithakazelo kakhulu ezimakethe zabasebenzi. Ngakho unezithuba eziningi zokuthola umsebenzi. Uma wenza kahle ngesikhathi semfundo yakho, ungakwazi ukuhlala unamathela emsebenzini wakho.
Umgcini wezinsiza usebenza amahora asheshe futhi usebenza amahora amaningi. Ukhokhwa kahle. Ngaphezu kwalokho, uthola amathiphu (amathiphu) njalo kumakhasimende anelisekile.
Ukuqeqesha uKelner imfundo yesikhathi esithile ngokuningiliziwe
Umgcini wezinsiza uhlela ihholo futhi unikeze imiyalelo ekamelweni labasebenzi kanye nomfundisi othisha.
Uqondisa amakhasimende, unikeza imenyu futhi uphuze iseluleko futhi uphatha ukukhokha. Umhlinzeki ulawula isitoko, ubeka ama-oda futhi abala izindleko.
Lo msizi wokuqeqesha uhlanganisa amamojula amaningi
Ibha ye-Module yokuqalisa nokusebenza: ufunda ukusebenza ngokuvumelana nemithetho yokuphepha kokudla, ulungise ibha, usebenzise imishini yokwenza iziphuzo ezishisayo, ...
I-Module Operation: ufunda umsebenzi wokulungiselela (imisa-en-indawo), uhlobisa igumbi, ubeke amatafula, uhlanganyele namakhasimende, avele futhi uchaze amamenyu, uthathe ama-oda, ...
Igumbi lamamodeli kanye nelungiselelo lethebula: ufunda ukufeza igumbi kanye nelungiselelo letafula, njengokulungiselela amatafula nezihlalo ngokuvumelana necebo, ukuhlinzeka ngezindwangu zetafula namaphilishi, ...
Sihlela ukwaziswa okutadisha kumamojuli ahlukene. I-module ngayinye ingxenye ephelele yohlelo.
I-module ngayinye ingaqala nganoma yisiphi isikhathi sonyaka wesikole.
I-module ngayinye ingakwandisa phezu kwe-1 noma iminyaka eminingi yesikole.
Amanye amamojula ayazimele, amanye amamojula athatha wena ngendlela ehleliwe.
Umsizi wokuqeqeshwa ukuqeqeshwa okuyisimanje
Umsizi wokuqeqesha uyisibonelo. Uma udlulisa imodemu okwamanje, uzothola isitifiketi esinqunyiwe ngokushesha. Phakathi nokuqeqeshwa kwakho, futhi phakathi nonyaka wesikole, uzothola ukubuka konke amaphakheji okufunda ekupheleni kwenkambo yokupheka.
Uma usudlulile wonke amamojula womsizi wakho wokuqeqesha uzothola isitifiketi sokuqeqeshwa kochwepheshe. Lokhu kungenzeka nganoma yisiphi isikhathi sonyaka wesikole. Izwe lebhizinisi liyavuma lesi sitifiketi.